५३ वर्षपछि उस्तै विपत्ति, उत्तिकै क्षति ! « Mechipost.com
५३ वर्षपछि उस्तै विपत्ति, उत्तिकै क्षति !
प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०७८, आईतवार ०९:१८
पाँचथर, २८ कात्तिक
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ खोलाखर्ककी रत्नमाया राईलाई १५ वर्षकी छँदा वि.सं. २०२५ साल कात्तिकमा एक सातासम्म वेमौसमी वर्षा भएको याद ताजै छ । सो समय सात दिनसम्म अविरल वर्षा भएपछि खोला खोल्सीमा बाढी आयो, गाई वस्तुलाई घाँसपानी गर्नसक्ने अवस्था पनि भएन । “गाई र भेडाहरु गोठबाट निकालेर छाडेका थियौँ”, राईले सम्झनुभयो ।
५३ वर्षपछि यस वर्षको कात्तिकमा समेत उस्तै वर्षा भयो । तर तीन दिन भएको वर्षापछि गाउँभरि पहिरो गयो । सुरक्षित मानिएको ठाउँमै पहिरो गएर घरवारविहीन हुनुपर्ला, छरछिमेकी गुमाउनु पर्ला भन्ने रत्नमायालाई लागेको थिएन । “त्यत्रो ठूलो पानीले केहि नबिगारेको हाम्रो गाउँमा यसपालि यस्तो होला भन्ने सोचेकी थिइनँ”, पहिरोले बगाएको घरका संरचना देखाउँदै रत्नमायाले भन्नुभयो, “कहिल्यै नसोचेको कुरा पनि भोग्नुपर्ने रहेछ ।”
खोलाखर्कका रविन बानुछा राई विगतमा सुरक्षित ठानिएको गाउँमा चारैतिर पहिरो जाँदा अचम्मित हुनुहुन्छ । स–साना पहाडहरुका वीचमा घेरिएको खोलाखर्क सबैलाई लोभ्याउने वस्ती थियो । खेतीपातीका लागि राम्रो माटो र आकर्षक मौसम हुने हुनाले सबैजना खोलाखर्कप्रति आकर्षित थिए । तर वेमौसमी वर्षापछि खोलाखर्कमा चारैतर्फ पहिरो झरेको छ ।
“यस्तो आनन्दको ठाउँ अहिले बस्न नै जोखिमपूर्ण होला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं”, पहिरोले घर बगाएपछि छिमेकीको शरणमा बस्नुभएका स्थानीयवासी विराज राईले भन्नुभयो, “वेमौसमी वर्षाले ल्याएको विपत्तिमा भाग्यले बाँच्न पायौँ ।”
मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ कन्याटारमा पहिरोले ठूलो क्षति नपु¥याएपनि बाढीले सबैलाई त्राहीमाम बनायो । वि.सं. २०२५ सालमा कात्तिक महिनामै वेमौसमी वर्षाले बाढी र पहिरो आएपनि त्यसपछि यसपालिको जस्तो विपत्ति कहिल्यै नआएको स्थानीयवासी ढालनाथ भट्टराई सुनाउनुहुन्छ ।
“हाम्रो ठाउँ धेरै पानी पर्ने स्थानमै पर्छ । तर यसपालि जस्तो विपत्ति कहिल्यै परेको थिएन”, भट्टराईले भन्नुभयो, “५३ वर्षपछि विपत्ति दोहोरियो ।” वेमौसमी वर्षा र यसले पु¥याएको क्षति कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको उहाँको भनाई छ ।
गत कात्तिक १ गतेदेखि ३ गतेसम्म अत्यधिक वर्षा भई बाढी र पहिराले क्षतविक्षत बनाएपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी पुराना दिनहरु सम्झिरहेका छन् । सो समयपनि अत्यधिक वेमौसमी वर्षा हुँदा टोलैपिच्छे पहिरो जानुका साथै खोला खोल्सीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको यहाँका जेष्ठ नागरिकहरु स्मरण गर्छन् ।
आधा शताब्दीपछि उस्तै विपत्ति मात्रै आइलागेन, केहि दिन त स्थानीयवासीले सोही समयमा याद दिलाउने समय ब्यतित गर्नुप¥यो । बाढी र पहिराले सडक, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत अवरुद्ध हुँदा मानिसहरु पुरानै दिनहरु याद गरे । “केहि दिन त अन्धकारजस्तै अवस्थामा सयम विताउनु प¥यो”, मिक्लाजुङ–७ लेखगाउँका सञ्जय राईले भन्नुभयो, “टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्चालनमा आएपछि मात्रै हाम्रोबारे अरुले थाहा पाए ।”
धान नाच्ने क्रममा लिम्बु समुदायले पालाम गाउँदा ‘पच्चिस सालको पैरो, निङ्वा मैरो’ भन्ने पङ्ती गाउँदछ । जसको अर्थ हो – २०२५ सालमा आएको पहिरोले मन हरायो, विरह चलायो । तर यसपालिको वर्षापछि आएको पहिरोले आँशु नै हराएको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ चिसापानी पञ्चमीका पदमशेर लावतीको भनाई छ ।
शिक्षक समेत रहेका छोरा विष्णुबहादुर लावती सहित एकै घरमा बसेका ११ जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएपछि रुँदारुँदै आँशु सकिएको पदमशेरको भनाई छ । “त्यो समय ठूलो वर्षापछि बाढी पहिरो गएकैले पालाममा गाइएको होला भन्ने मलाई लाग्छ”, पदमशेरले भन्नुभयो, “यसपालि त आँशु नै सुकेको छ ।”
आधा शताब्दीपछि विनासले विकासको गतिमा अगाडि बढेको मिक्लाजुङमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, भौतिक संरचना लगायतमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा धेरै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमको भनाई छ ।
“यसपालिको विनासलाई निकै ठूलो लगानीले मात्रै पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ”, माखिमले भन्नुभयो, “हामीलाई सबै पक्षबाट ठूलो सहयोग चाहिएको छ ।” विशेषतः घरबारविहीन बनेका, पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका र जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका सर्वसाधारणको पुनर्बास मिक्लाजुङमा अत्यावाश्यक देखिएको छ ।
यसका लागि सरकारले ठोस् प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । बाढी र पहिराले यो गाउँपालिकामा मात्रै २२ जनाको ज्यान जानुका साथै तीन जना वेपत्ता छन् । यहाँका सयौँ घरहरु बसोबास गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् भने भौतिक संरचनाहरु क्षतविक्षत बनेका छन् ।